दर्शन अध्यात्मक – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : राशिफल : वि.सं. २०७८ आषाढ २७ गते आइतवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –धनागमको सङ्केत छ । शरीर फूर्तिलो भएको महसुस हुनेछ । परिणाममुखी काममा लगानीको समय छ । चुनौतीका बाबजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ । धैर्यले काम लिने समय छ । जीवनसाथी, सन्तति वा विपरीतलिङ्गी साथीसँग सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ । मातृधनबाट लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ । महत्त्वाकाङ्क्षी योजना फलीभूत हुनसक्छन् । आजका लागि शुभअङ्क : ४ र शुभरङ्ग : घिउ रङ हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ सों सोमाय नम न्यूनतम जापसङ्ख्या : ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । व्यापारमा मनग्ये धनलाभ हुनेछ । साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन् । नयाँ उद
सफलताका ५ सुत्र
Sapana Sanjal : बुद्ध भन्नुहुन्छ – “सबै मानिसलाई सफल हुने अवकाश छ” यद्यपि सफलताका लागि नियमहरुको पालन गर्नुपर्दछ हिजो बुद्ध प्रशिक्षित (५) प्रकारका सफलताकालागि गर्नुपर्ने भावना प्रस्तुत गर्दा मित्रहरुले एक एकको अर्थपनि प्रस्तुत गर्न आग्रह हुनाले आज संक्षिप्तमानै प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्दैछु – आभारी ती मित्रहरुप्रति । – चीरकाल भावना –१ कुनैपनि कार्यगर्दा तत्क्षण सफलता प्राप्त हुँदैन । अलिकति समय दिएर त्यो कार्यकालागि प्रयास गर्नुपर्नेहुन्छ । कतिपय मानिस कुनै कार्य आरम्भ गरो अनि भएन भन्दै एकैछिनमा चट्ट छोडेर अर्को पछि लाग्दछन् । त्यसो गर्नाले सफलता हासिल गर्न सरल पर्दैन । अझ बिस्तृतमा भन्नुपर्दा कति सज्जनहरु अतीतमा अभ्यस्त भैसकेको हुनाले त्यो अतितको पारमिताले अलि शीघ्र पारंगत हुन्छन् र सफलता हासिल गर्दछन् त्यस्ता मसिना कुरा पनि बुझेर सफलता चाहनेले आफूले आरम्भ गरेको कार्यमा समय दि
Sapana Sanjal : बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदा विश्व एउटा महामारीमा छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले विश्वका अधिकांश देश प्रभावित छन् । यतिबेला प्रकृति रमाइरहेको छ तर विश्वका मानव जाती भने त्रसित छन् । यहाँ द्वन्द्व छ । एकले अर्काे देशलाई आरोप पत्यारोप लगाइरहेका छन् । एक आपसमा करुणाको भावना हराएको छ । कोभिड-१९ लाई हामीले भयंकर विपद्का रुपमा लिइरहेका छौं । यो भन्दा ठूला आपत् विपत् आउन सक्छन् किनकि मानिसमा आत्मज्ञान भन्दा पनि अहंकार, रिस, क्रोध, जलन, स्वार्थ बढेको छ । बुद्धको चार आर्यसत्य, अष्टांगिक मार्ग, उनले सिकाएको ज्ञान र ध्यानका विषयमा मानिसको मोह हराएर विश्व अशान्त बन्दै गएको छ । जब पोखरी हिलो हुदै जान्छ तब सुन्दर कमलको फुल फुल्छ । कमलको फुल र बुद्धको सांकेतिक अर्थ छ । जतिबेला सिद्धार्थ गौतम कपिलबस्तुमा जन्मेका थिए । त्यतिबेला पनि महल बाहिर भोकमरी चलिरहेको थियो । राजाहरुमा चक्रवती बन्ने अहंक
Sapana Sanjal : एउटा बौद्ध कथा छ, भगवान बुद्धसँग भेट्न एक राजा आए र सोधे— हाम्रो राजकुमार, जसलाई सबैकुराको सुविधा छ, जो ठूलो महलमा रहन्छन, उनीसँग नोकर—चाकरको पूरै फौज छ, उनी खुसी रहँदैनन् । जहिल्यै तनाव र समस्यामा घेरिएका देखिन्छन् । मैले हरेक तरिकाको सुविधा दिएर हेरेँ । उनी प्रशन्न हुँदैनन् । जबकि, तपाईंको ति भिक्षु जो पदयात्रा गर्दछन्, जे प्राप्त हुन्छ त्यहि खान्छन्, बस्नको लागि जुन कुटि भेटिन्छ त्यहि सुत्छन्, उनको अनुहारमा जहिल्यै अत्यन्तै खुसी देखिन्छ । यसको कारण के हो ? भगवान बुद्धले उत्तर दिए— खुसी खोज्ने हो भने जोसँग केही छैन, उसमा खोज्नुहोस् । जसले संकल्प गरेर सबैकुरा छोड्छ उ नै खुसी रहन सक्छ । जो स्वेच्छाले सबै चिजलाई त्याग गर्दछ, उ नै जहिल्यै प्रशन्न रहन सक्दछ । भिखारी कहिल्यै खुसी हुँदैन, किनकी उसले छाडेको हुँदैन । उ त अभावमा जीवन जिइरहेको छ । अभावको जीवन जिउनेवाला कहिल्यै खु
Sapana Sanjal : जनावरले केवल हाम्रो शरीरमा नोक्सानी पुर्याउँछ तर खराब मित्रले हाम्रो दिमागमा] काठमाडौँ – बौद्ध धर्मका संस्थापक गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा एक राजपरिवारमा ५६३ इसा पूर्वमा भएको थियो । गौतम बुद्धको बाल्यकालको नाम सिद्धार्थ गौतम थियो । राजकुमान सिद्धार्थको विवाह यशोधरासँग भएको थियो । उनीहरुको पुत्रको नाम राहुल थियो । जब राहुल साना थिए, तब सिद्धार्थ आत्म ज्ञानको प्राप्तिको लागि माता-पिता, पत्नी र पुत्रलाई छोडेर गएका थिए । कयौँ वर्षको तपस्यापछि भारत विहारको बोध गयामा बोधी वृक्षको छहारीमा दिव्य ज्ञान प्राप्त गरे । यसपछि उनी गौतम बुद्ध कहलाए । गौतम बुद्धको शिक्षा आजपनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र मननयोग्य छन् । बुद्ध दैनिक आफ्ना शिष्यलाई उपदेश दिन्थे । बुद्ध आफ्नो प्रवचनमा क्रोध, अहँकार, लोभ, शत्रुतालाई त्याग्ने कुरा गर्थे । उनको विचार अनुशरण गरेर हामी जीवनलाई सत्मार्गको
Sapana Sanjal : राशिफल : वि.सं. २०७८ आषाढ २६ गते शनिवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)आज कुनै कुराले मनमा शान्ति र प्रसन्नता मिल्ने छ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । आदर्श व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा)विशेष यज्ञादी तथा धार्मिक कृत्यमा सहभागीको अवसर मिल्ने छ । भौतिक साधन जुटाउने समय छ । रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे)आज धार्मिक र सांस्कृतिक सभा, समारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ । प्रेमीले नयाँ स्थानको भ्रमण गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छन् । तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते)पर्यटकीय स्थलको भ्रमणले मन लोभ्याउने छ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । स्वादिलो परिकार पनि मिल्ने छ । धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे)
Sapana Sanjal : मनुष्य जातिको इतिहासमा गौतम बुद्ध जस्तो महिमापूर्ण नाम दोश्रो छैन । बुद्धको धर्म बुद्धिको धर्म हो । बुद्ध इतिहासका सबैभन्दा महान व्यक्ति मध्य एक हुन, जसले बौद्ध धर्मको रुपमा मानवतालाई अमूल्य सन्देश दिएर गएका छ । उनले स्थापना गरेको बौद्ध धर्म आज विश्वमा ५० करोड भन्दा पनि बढि ब्यक्तिहरुले मान्दै आईरहेका छन् । उनै गौतम बुद्धका उपदेशलाई तपाईँ हामीले अनुशरण मात्र गरेपनि जीवनमा ठूला परिवतर्न आउन सक्नेछ । १. संसार दुःखले भरिएको छ, यी दुःखका मुख्यकारण हाम्रा इच्छाहरु हुन्। हामीले हाम्रा इच्छाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा दुःखलाई नाश गर्न सकिन्छ । २. यदि तपाईँको एउटा इच्छा पुरा भयो भने तुरुन्त अर्को इच्छा जन्मिनेछ । ३. क्रोधलाई पालेर राख्नु भनेको तातो कोईलालाई पक्रेर राख्नु र अरु कुनै स्थानमा फ्याक्ने मनसायले राख्नु समान हुन्छ । यसले तपाईँलाई नै जलाउने छ । ४. सत्यको
भगवान् गौतम बुद्धले दिएको ५ अनमोल वचनहरु अवस्य जान्नुहोस्
Sapana Sanjal : भगवान गौतम बुद्धले बौद्ध धर्मको प्रवर्तन गरेका थिए । बुद्धको अहिंसा र करुणाको सिद्धान्तले सम्राट अशोकलाई यतिधेरै आर्कषित गरेको थियो कि उनले यसबाट प्रभावित भई बौद्ध मतलाई स्वीकार गरे युद्धमा रोक लगाएका थिए ।बुद्धका अधिकतर उपदेश सामाजिक र सांसारिक समस्यामा केन्द्रित रहेको छ । उनले सैयौं बर्ष पहिले भनेका कुरा वा विचार आज पनि प्रासँगिक रहदै आएको छ । उनका वाणीहरुले व्यक्तिको जीवन सफल र सुखीमय बनाउन मद्दत गर्दछ ।बुद्धका अनमोल वचनमार्फत व्यक्तिलाई जागरुक गराउनुका साथै ज्ञानको प्रकाश फैलाउन मद्दत गर्दै आएको छ । गौतम बुद्धका केही अनमोल वचनका साथ दिनको शुरुवात गरे सकारात्मक सोच बढ्दछ । १. जो मानिस जस्तो सोच्दछ, उसको सोच अनुसार उ त्यस्तै बन्दछ । यस्तोमा कोही व्यक्ति खराब सोचका साथ बोल्छ वा काम गर्दछ भने उसले कष्ट नै भोग्नु पर्दछ । तर यदि कोही व्यक्ति शुद्ध विचारका साथ बोल्दछ वा
Sapana Sanjal : हामी गौतम बुद्धको गुणगाण गाउछौं । बुद्धको जन्मप्रति गौरव गर्छौं । तर, बुद्धले जुन मार्गदर्शन गरे, त्यो बाटोमा हिँड्ने प्रयास भने गर्दैनौं । वास्तवमा भगवान बुद्धले आफुलाई पूज्य बनाउका लागि कुनै उपदेश दिएका थिएनन् । खासमा त्यो कुरालाई सम्पूर्ण मानव जातिले सुन्नेछन्, बुझ्नेछन् र आफ्नो जीवनमा उपयोग गर्नेछन् भन्नका खातिर उनले बुद्ध दर्शनको प्रतिपादन गरेका थिए । अतः यहाँ उनको अनमोल बचनहरु प्रस्तुत गरिएको छ । – स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो उपहार हो । सन्तोष सबैभन्दा ठूलो धन हो । बफदारी सबैभन्दा ठूलो सम्बन्ध हो । – तीन चिज धेरै लामो समयसम्म लुक्दैन । सूर्य, चन्द्रमा र सत्य । – आफ्नो मोक्षको लागि स्वयम् प्रयास गर । अर्कामा निर्भर नगर । – घृणा, घृणाले होइन प्रेमले अन्त्या हुन्छ । यो शाश्वत सत्य हो । – बिना स्वास्थ्य जीवन, जीवन होइन । केवल एक पीडाको स्थिती हो । मृत्युको छवी
Sapana Sanjal : तपाईँलाई थाहा छ पत्‍नी कति किसिमका हुन्छन्? बौद्ध ग्रन्थमा पत्‍नीका प्रकार बारे एउटा रमाइलो वर्णन भेटियो। भगवान गौतम बुद्ध आफैले सात किसिमका पत्‍नीहरुको बारेमा बयान गरेका हुन्। कुरा गौतम बुद्धले धर्म प्रचार गरिरहेको बेलाको हो। त्यस कालमा अनाथपिण्डिक नामका एक व्यक्ति थिए। उनी आफै, उनका छोरा र दुई छोरी साह्रै धर्मात्मा थिए। उनले आफ्ना छोराको बिहे सुजाता नामकी एक युवतीसँग गरिदिएका थिए। सुजाताको स्वभाव भने विपरीत। एक पटक भगवान अनाथपिण्डिकको घरमा जाँदा कोलाहल मच्चिरहेको रहेछ। कारण सोध्दा अनाथपिण्डिकले भगवानलाई सबै बताइदिए। त्यसपछि भगवानले सुजातालाई बोलाई सात प्रकारका पत्‍नी बारे उपदेश दिएका रहेछन्। सात प्रकार यस्तो छ- १) बधक पत्‍नी जो स्त्री आफ्ना पतिप्रति द्वेष भाव राख्छे, अहित चिन्तन गर्छे, परपुरुषप्रति आशक्त भएर पतिको अपमान गर्छे, पतिको धनका लागि पतिको वध गराउन पनि प